राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा को को विजयी भए ? – Famous Nepal
10:13: PM Thursday October 18, 2018
Posted on February 8, 2018 at 1:27 pm by फ्यामोस नेपाल
काठमाडौं : चिया व्यवसायी आनन्दकुमार मित्तल ८ माघमा विराटनगरबाट पक्राउ परे। प्रहरीले उनको साथबाट दुई हजार दरका चार सय २५ थान भारतीय रुपैयाँ बरामद गर्‍यो। ऋण तिर्न भारतमा बसोबास गर्ने आफन्तबाट मित्तलले पैसा सापट मागेका थिए।
नेपालमा ठूला दरका भारतीय रुपैयाँ चलाउन नपाउने थाहा पाएका कतिपय पर्यटकले नेपाल आउँदा हुन्डीमा पैसा पठाउन थालेको व्यवसायी बताउँछन्।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘क्यासिनोमा जुवा खेल्न आउनेले पनि हुन्डीबाट पैसा पठाउन थालेका छन्। ठूला दरका नोट ल्याउन नपाउँदा गैरकानुनी कारोबार फस्टायो।’
पछिल्लो समय भारतबाट नेपाल आउनेलाई सीमा क्षेत्रका प्रहरीले समेत भारतीय रुपैयाँ बोकेको छ कि छैन भनेर सोध्ने गरेको छ।
कतिपय अवस्थामा सामान्य मानिसको पैसा नेपालमा चलाउन पाइँदैन भन्दै प्रहरीले लिने गरेको व्यवसायी गुनासो गर्छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा नेपाल आउने भारतीय पर्यटकको संख्या ठूलो भएकाले भारतीय रुपैयाँ पाँच सय र दुई हजार नेपालमा चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘भारतले जेएसटी लगाएपछि व्यापारको सबै काम बैंकबाट हुन्छ। पैसा नचलेका कारण व्यापार रोकिँदैन। तर, नेपाल घुम्न आउनेलाई पैसा बोकेकै आधारमा अपराधी बनाउनु हुँदैन। यस्तो भइरहने हो भने नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले नेपालको विकल्पमा अन्य देश खोज्छन्।’
किसानले ढुक्कले लिँदै
नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट अदुवा, अलैंची, बन्दा, टमाटरलगायत कृषि उत्पादन भारत जाने गरेका छन्। पूर्वको नाका काँकडभिट्टाबाट चालु आवको पहिलो चार महिनामा पाँच करोड ७४ लाख रुपैयाँको बन्दा मात्र निर्यात भएको देखिन्छ।
पूर्वीपहाडी जिल्लाबाट वर्षाको मौसममा काउली, बन्दा, हरियो सिमी, हरियो धनिया र टमाटरजस्ता भारतको समथर भूभागमा हिउँदमा मात्र खेती हुने तरकारी निकासी हुँदै आएको छ।
तरकारी किन्न भारतीय व्यापारी किसानको बारीमै आउने गर्छन्। उनीहरूले दिने भारतीय रुपैयाँका आधारमा किसानले तरकारी बेच्दै आएका छन्। भारतीय व्यापारी किसानको खेतमा गएर कृषि उत्पादन किन्ने गरेको दमक उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल खतिवडाले बताए।
उनले भने, ‘अहिले सुपारी, अदुवा र धान बेच्ने बेला हो। यस्तो बेलामा भारतीय व्यापारीले किसानलाई खेतमै पैसा दिन्छन्।’ एक सय दरको नोट बोकेर ल्याउन गाह्रो हुने बताउँदै भारतीय व्यापारीले पाँच सय र दुई हजार दरका नोट ल्याउने गरेका छन्।
किसानले राखेको पैसा चलेन भने ठूलो समस्या आउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष खतिवडा बताउँछन्। उनले भने, ‘भारतीय रुपैयाँ प्रतिबन्धित हुँदा डुबेका किसान फेरि डुब्नेछन्।
सोच्नै नसक्ने गरि हिजो घटेको सुनको भाउ आज फेरी अहिले सम्मकै महँगो मुल्यमा बिक्रि,एति धेरै वृद्धि भयो सुनको मोल
Posted by फ्यामोस नेपाल - February 9, 2018 0
काठमाण्डौं २६ माघ । सुनको भाउ शुक्रबार तोलामा २ सय रुपैयाँ बढेको छ । सुन शुक्रबार तोलाको ५६ हजार ८…
सफल बन्न के गर्नुपर्छ ? जान्नुहोस
Posted by फ्यामोस नेपाल - January 16, 2018 0
जीवनमा उतारचढाव आइरहन्छ । जसको दिमाग स्वस्थ हुन्छ, उसले यस्ता उतारचढावलाई सहजै स्वीकार्छ । दिमागलाई स्वस्थ राख्नका लागि आफूसँग रहेका…
ने.वि.संघ पृ.ना.क्याम्पस स्नातक तह प्रथम वर्ष द्वार भेटघाट,चियापन एवंम अन्तर्क्रीयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न ।।
Posted by फ्यामोस नेपाल - February 23, 2018 0
फाल्गुन ११ सुक्रवार,०७४ पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्यान्नरत ने.वि.संघ कक्षा प्रतिनिधि विधार्थीहरुको आज एकाआपस विच अन्तर्क्रीयात्मक भेटघाट एवंम…
पोखरा ५ पर्स्याङमा स्कुटर दुर्घटना हुदाँ एकको मृत्यु
Posted by फ्यामोस नेपाल - March 22, 2018 0
पोखरा ५ पर्स्याङमा स्कुटर दुर्घटना हुदाँ एक जनाको ज्यान गएको छ । मंगलबार राति करिब १२: ३० बजे पर्स्याङको धर्मस्थलि…
काठमाडौ – प्रहरी इन्काउन्टरमा गुण्डा नाइके मनोज पुन मारिएका छन् । बुधबार बिहान ३ः३० बजे प्रहरीसँगको मुठभेडमा पुन सहित उनका…